Orinasa sy mpanamboatra tariby pitaovan'ny Sekoly An-trano any China Home School & Office | Newera
Tape momba ny sekolim-pianakaviana sy ny birao
Ampiasaina amin'ny fonosana baoritra izy io, ny faritra tsy miova, ny zava-maranitra mifatotra ary ny endrika kanto.
Item Code hanampy Adhesive Hateviny (MG) Tanjaka mahery (N / cm) Tack ball (No. #) Hery mitazona (h) Elongation (%) 180°hery peel (N / cm)
Tape fonosana Bopp XSD-OPP Sarimihetsika Bopp Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 >24 140 2
Tape fonosana mazava tsara XSD-HIPO Sarimihetsika Bopp Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 >24 140 2
Tape fonosana loko XSD-CPO Sarimihetsika Bopp Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 >24 140 2
Tape fonosana vita pirinty XSD-PTPO Sarimihetsika Bopp Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 >24 140 2
Tape Stationary XSD-WJ Sarimihetsika Bopp Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 6 >24 140 2
1928 Scotch tape, Richard Drew, St. Paul, Minnesota, Etazonia
Nangataka tamin'ny 30 May 1928 tany Angletera sy Etazonia, Drew dia namolavola adhesive iray tena maivana sy tokana. Ny fikasana voalohany dia tsy nifikitra mafy, ka nilazana i Drew hoe: "Ento miverina any amin'ny lehiben'ny Scottish io zavatra io ary angataho izy ireo hametaka lakaoly bebe kokoa!" ("Skotosy" dia midika hoe "mahihitra". Fa nandritra ny Fahaketrahana Lehibe, ny olona dia nahita fampiasana an-jatony tamin'ity kasety ity, nanomboka tamin'ny fametahana akanjo ka hatramin'ny fiarovana ny atody.
Fa maninona no azo atao mifikitra amin'ny zavatra hafa ny kasety? Mazava ho azy fa noho ny sosona adhesive amboniny! Ny adhesives voalohany dia avy amin'ny biby sy zavamaniry. Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny fingotra no singa fototra amin'ny adhesives; raha maoderina, polymera isan-karazany no be mpampiasa. Ny adhesives dia afaka mifikitra amin'ny zavatra, satria ny molekiola tenany sy ny molekiola ampifandraisina hamorona fatorana, ity karazana fatorana ity dia afaka mifikitra mafy ny molekiola. Ny firafitry ny adhesive, araky ny marika isan-karazany sy ny karazany samy hafa, dia misy polymers isan-karazany.
Ny famehezana fehezana dia antsoina koa hoe bopp tape, tape fonosana sns ... Mampiasà sary mihetsika polypropylene BOPP miorina amin'ny biaxally ho toy ny fototr'izany ary mampihatra emulsion adhesive sensitive pressure aorian'ny fanamafisana ny endrika 8μm —- 28μm Adhesive layer dia singa iray tena ilaina amin'ny fiainan'ireo orinasa indostrialy maivana, orinasa ary olon-tsotra. Tsy manana fenitra lavorary ho an'ny indostrian'ny kasety any Sina ny firenena. Iray ihany ny fenitra indostrialy "QB / T 2422-1998 BOPP tape adhesive sensitive pressure for famehezana" Taorian'ny fitsaboana corona avo lenta an'ny sarimihetsika BOPP tany am-boalohany dia nipoitra ny rindrina misitery. Rehefa avy apetaka aminy ny lakaoly dia aorina aloha ny horonan-taratasy jumbo, ary avy eo manapaka horonan-taratasy kely misy famaritana samihafa amin'ny masinina manaparitaka, izay ilay kasety ampiasaintsika isan'andro. Ny singa lehibe amin'ny emulsion adhesive adhesive sensitive dia ny butyl ester.
Ny kasety avo lenta sy avo lenta dia misy fampisehoana tsara na dia amin'ny toetr'andro henjana be aza, mety amin'ny fitehirizana entana ao anaty trano fitehirizana, kaontenera fandefasana, fisorohana ny fangalarana entana, fanokafana tsy ara-dalàna, sns. scotch
Hery adhesive Instantaneous: mifikitra sy mafy orina ny kasety fanaovana famehezana.
Fahaizana manamboatra: na dia misy tsindry kely aza dia azo amboarina amin'ny workpiece arakaraka ny hevitrao.
Mora rovitra: mora esorina ny horonan-tsarimihetsika nefa tsy mihinjitra sy misintona ilay kasety.
Fanalana andro voafehy: ny kasety fanaovana famehezana dia azo esorina amin'ny horonan-taratasy amin'ny fomba voafehy, sady tsy malalaka loatra no tsy tery loatra.
Fifanentanana: ny kasety fanaovana famehezana dia afaka miovaova mora foana amin'ny endrika miolakolaka miovaova haingana.
Karazana manify: ny horonam-peo famehezana dia tsy hametraka fametrahana matevina amin'ny sisiny.
Fahalemem-panahy: malefaka amin'ny fikasihana ny kasety famehezana ary tsy mahasosotra ny tananao rehefa tsindriana amin'ny tananao.
Anti-transfer: tsy misy adhesive tavela aorian'ny fanesorana ny kasety famehezana.
Fanoherana fanoherana: ny fitaovan'ny kasety famehezana dia misoroka ny fidiran'ny solvent.
Anti-fragmentation: tsy hitresaka ny kasety fanaovana famehezana.
Anti-retraction: ny kasety fanaovana famehezana dia azo ahinjitra manaraka ilay faritra miolaka raha tsy misy ny fihemorana.
Anti-stripping: ny loko hifatotra mafy amin'ny fitaovana famerenan'ny kasety famehezana.
Mety amin'ny fonosana vokatra ankapobeny, famehezana sy famatorana, fonosana fanomezana sns.
Loko: Ny fanontana pirinty dia ekena arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Ny kasety famehezana mangarahara dia mety amin'ny fonosana baoritra, manamboatra ampahany, manangona zavatra maranitra, famolavolana zavakanto, sns.;
Ny takelaka famehezana loko dia manome loko isan-karazany mifanaraka amin'ny endrika sy ny hatsarana ilaina amin'ny hatsarana;
Ny pirinty fanaovana tombo-kase dia azo ampiasaina amin'ny famehezana varotra iraisampirenena, lozisialy, magazay fivarotana an-tserasera, marika elektrika, kiraro akanjo, jiro fanaovan-jiro, fanaka ary marika malaza hafa. Ny fampiasana fanontana fanontana tombo-kase dia tsy vitan'ny fanatsarana ny sarin'ny marika ihany, fa koa hahatratrarana Mass Media Informing Advertising.
Previous: Natonta Tape Carton Logo
Manaraka: Tape fonosana fanoherana ny hatsiaka
Tape fonosana mavesatra amin'ny adidy mavesatra ho an'ny fivezivezena P ...
Tape fandefasana hafanana ambany
Tape fonosana mora rovitra
Tape fonosana fandefasana adidy mavesatra miloko
Natonta Tape Carton Logo